Scrot, kana maitiro ekugadzira skrini muRaspbian isina ImpPt kiyi | Linux Vakapindwa muropa
Avo vedu vane Raspberry Pi vanoziva zvayakanakira. Hatisi kutarisa komputa senge chero imwe, asi isu tinogona kuita zvakafanana chinhu chimwe chete. Imwe yeakanakisa mashandiro esisitimu atinogona kuisa ndeyeRaspbian, zano rekambani imwe chete, asi haisi yakapusa kana seyakajeka senge mune mamwe masisitimu anoshanda. Dzimwe nguva zviriko, asi zvinogona zvakare kuti tiri kushandisa zvinhu izvo zvisinga sanganise zvese zvinodiwa, senge iyo ImpPt kiyi iyo mune raspberry system inofanirwa kukumbira chishandiso scrot.
Kunge mazhinji masisitimu anoshanda, ikozvino ini handigone kufunga nezve chero iyo isina iyi sarudzo, Raspbian inosanganisira chishandiso chekutora skrini. Chinhu chakashata ndechekuti nhasi haina kusanganisira GUI, saka isu tichafanirwa kuimhanya kubva kune iyo terminal kana kugadzira launcher. Iko kune zvekare zvimwe zvingasarudzwa, asi isu tinotofanirwa kuisa yekuwedzera software. Tevere tinokuratidza sei kutora zvidzitiro muRaspbian.
1 Maitiro ekutora skrini pamwe neScrot
1.1 Bata nekunonoka
1.2 Tora fafitera
2 Wedzera nzira pfupi kubva kuScrot kuenda kuWhisker
3 Kuisa iyo GNOME chishandiso
Maitiro ekutora skrini pamwe neScrot
Chishandiso chinosanganisira Raspbian chinotibvumidza kuti tiite zvimwechetezvo zvimwechetezvo sechero ipi skrini yekushandisa. Kuti utore chiitiko, ingo tinya iyo ImpPt kiyi o Dhinda Screen (kana PrtScr), panguva iyo mufananidzo unozochengetwa mune yedu yega folda. Zvinhu zvinoomarara kana isu tiine keyboard iyo yatinoshandisa seye controller nekuti isu tine yedu Raspberry Pi senzvimbo yemultimedia, semuenzaniso. Kana tisina kiyi yakagadzirirwa kutora skrini, tinogona kuita imwe nekutaipa "scrot" pasina makotesheni. Uye kubva pano panouya sarudzo.
Iwo wekuraira ndi "scrot [sarudzo] [zita refaira]". Chinhu chekutanga kuziva ndechekuti kutora kuchaponeswa mudhairekitori kwatinonyora rairo, saka kana mune inonyora tinonyora cd / imba / Pablinux / Inotora uyezve "scrot", kubatwa kuchaponeswa munzira iyoyo. Chinhu chinotevera kuchengeta mupfungwa ndechekuti kubatwa kunoitwa ipapo ipapo, saka kana tikazviita nemirairo yakapusa, isu zvakare tinotora iyo terminal. Kuti tidzivise izvi, tinogona kushandisa imwe yesarudzo dzinotevera:
Tinogona kutora skrini mushure menguva yakati, mune ino kesi isu tinonyora zvinotevera (kuchinja TIME yenguva mumasekondi):
scrot -d TIEMPO
Kana mushure menguva NGUVA tawedzera iyo -c Sarudzo tichaona zvakare kuverenga.
scrot inotitenderawo kuti tiite windows zvidzitiro, mune iyo kesi isu patinoshandisa iyo -s Sarudzo:
Iwo wekuraira hauzopedziswa kudzamara tasarudza hwindo ratiri kuda kutora. Kana tichida kuti hwindo rive nemiganhu, tinofanirwa kushandisa b (-sb). Asi chenjera, kana isu tine chimwe chinhu pamusoro pehwindo, icho chichaibata zvakare.
Muzviitiko zvese zvakapfuura, isu tinokwanisa kusevha kubatwa mune chero dhairekitori kana isu tikawedzera zita refaira kuseri kwaro nenzira inosanganisirwa.
Wedzera nzira pfupi kubva kuScrot kuenda kuWhisker
Asi kana chinhu chega chatinofarira chiri kutora screenshots uye, sezvataratidza, hatina kiyi yekuita kudaro, tinogona Wedzera chishambadziro kuWhisker kubva kwatichaita macaptures. Ini ndinokurudzira kuwedzera rairo yekuvaita nekunonoka kunotipa nguva yekuti chiitiko chive chaizvo sekuda kwedu, anogona kuva matatu kana mashanu masekondi. Tichazviita zvinotevera:
Tinoenda kumenyu huru / Zvaunofarira / Main menyu mupepeti.
Isu tinosarudza iyo submenu kwatinoda kuti launcher ioneke.
Tinodzvanya paNew element.
Isu tinozadza muminda:
Muna «Zita» tinoisa zita rinozoonekwa.
Mu "Raira" tinowedzera rairo. Semuenzaniso, scrot -d 5.
Tinogona kusiya chirevo chisina chinhu, asi isu tinokwanisa zvakare kuwedzera tsananguro inozoonekwa kana tofamba pamusoro pekutanga muWhisker.
Tinodzvanya pamufananidzo uye tinowedzera chiratidzo pairi. Tinogona kurodha pasi zvatinoda kubva padandemutande.
Kuisa iyo GNOME chishandiso
Chokwadi vazhinji venyu muri kushamisika kana muchikwanisa kushandisa imwe app yeescreenshots uye kwete icho chisarudzo iyo inosanganisa nekutadza. Hongu unokwanisa uye iyo inoshanda zvakanyanya muRaspbian ndeye GNOME-Screenshot. Zvese zvatinofanirwa kuita kuishandisa kuvhura terminal uye kunyora:
Iko kunyorera kuchamirira isu muchikamu cheWhisker Accessories. Ndinovimba mutungamiriri mudiki uyu ave anobatsira kwauri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Zvimwe Linux » Scrot, maitiro ekugadzira skrini muRasbpian isina ImpPt kiyi
Raspbian OS - Yakagadziridzwa nezvigadziriso zveRaspberry Pi 4 rutsigiro